Kitra – Na teo aza ny ady sahala tamin’ny Elefanta…: efa any Kameronina ny tongotra ilan’ny Barea, hatreto | NewsMada
Na teo aza ny ady sahala nifanandrinan’ny Barea sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, omaly tany Toamasina, mbola misy hatrany ny fanantenana. Samy mitarika ao anatin’ny vondrona K misy azy ny roa tonta. Efa any Kameronina ny tongotra ilan’ny Barea, hatreto.
Efa any amin’ny ”Can 2022” hatao any Kameronina ny tongotra ilan’ny Barea, taorian’ny ady sahala 1 no ho 1 nanoloana ny Elefanta ivoarianina. Samy manana isa fito mitovy ny andaniny sy ankilany izao. Manana isa enina kosa ny ny Etiopianina, mijanona eo amin’ny laharana fahatelo rehefa nanamontsana 3 no ho 0 an’i Niger, miray sokajy amintsika, tamin’ny lalao omaly koa. Handray an’i Niger ny Barea ny volana marsa 2021, raha efa nomontsanin’i Madagasikara 6 no ho 2 tamin’ny lalao mandroso ary hanafika an’i Etiopia kosa avy eo. Izany hoe, mila mandresy an’i Niger eto an-toerana sy any Etiopia na farafaharatsiny, manao sahala amin’izy ireo ahafahana mahazo ny tapakila amin’ny ”Can 2022”.
Nivoaka sempotra tanteraka
Tsiahivina fa ady sahala, 1 sy 1, ny nisarahan’ny roa tonta teto amin’ny kianja Barikadimy Toamasina. Nivoaka sempotra tanteraka ny ekipa malagasy vao nahasala ny isa. Nitarika, 1 no ho 0, mantsy ny Ivoarianina, hatreo amin’ny minitra faha-50. Baolina tafiditr’i Kessi, tamin’ny alalan’ny “pénalty”, teo amin’ny minitra faha-13, rehefa nandray tanana, tao anaty faritra tsy azo ivalozana, i Jeremy Morel, noho ny fikoropahana. Nanjakan’ny Elefanta, notarihin’i Nicolas Pepe sy i Teddy Haller ary i Serge Aurier, ny tapa-potoana voalohany. Nitsitapitapy kosa ny fanafihan’ny Barea, izay tsy nampitahotra mihitsy ny vodilaharana ivoarianina. Niezaka nandrindra fanafihana ihany i Amada sy i Marco, teo afovoan’ny kianja, saingy tsy tonga mihitsy tany amin’i Hakim, lohalaharana malagasy, ny baolina fa ravan’ny Ivoarianina hatrany. Hita ho tsy tafiditra tao anaty lalao mihitsy i Metanire sy i Ryan. Vokatr’izay, voatery nidina i Carolus, naka baolina. Zara fa nahatafavoaka baolina ny vodilaharana malagasy.
Tara loatra ny fanoloana mpilalao
Niezaka nifoha tamin’ny torimasony ny Barea, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Nosakanana tany ambony ny Elefanta ary nomena baolina matetika ireo lohalaharana. Nahitam-bokany izany teo amin’ny minitra faha-51, rehefa tafaporitsaka tampoka i Carolus, ka nanolotra baolina ho an’i Mombris ary nandefa izany ho an’i Amada, ary namarana izany tamin’ny daka mandrivorivo, ka nampikobana ny masonaraton’i Gbohouo.
Nahazo aina ny Barea teo ka sesilany ny fanafihana, saingy hita ihany ny havizanan’ireo mpilalao. Efa tokony hisy ny fanoloana mpilalao, saingy toy ny mahazatra azy, tsy nanao izany i Nicolas Dupuis, raha tsy tany amin’ny 10 mn farany, ka nanala an’i Carolus sy i Paulin ary i Ryan sy i Hakim ka nampiditra an’i Loic sy i Sylvio ary i Zotsara, niampy an-dRamalingom. Fohy loatra anefa ny fotoana nilalaovan’izy ireo ka tsy ampy nanehoan’izy ireo ny fahaizany.
Samy nahazo isa 1 avy izany Elefantan’i Côte d’Ivoire sy ny Barea, taorian’iny lalao iny, saingy mbola mitarika aloha, hatreto, ny Ivoarianina.
Mpilalaon’ny Barea, i Carolus sy i Melvin: “Zava-dehibe ny ady sahala eo amin’ny filaharana. Samy nanome ny tsara indrindra ny mpilalao na teo aza ny tsy fahampian’ny fifantohana sy ny fikorontanana. Nanao ny faran’ny hery isika… Miezaka ny ho laharana voalohany hatrany isika. Somary elaela vao tafiditra tao anaty lalao izahay tamin’ny fizaram-potoana voalohany. Nohatsaraina izany tamin’ny fizaram-potoana faharoa tamin’ny fanovana mpilalao… Ireny aloha ny vokatra”.